Usb-C hub abenzi kunye suppliers - China usb-C hub mveliso
Uluhlu olude 2624ft. Ngaphandle kwamacingo ...
Imbonakalo Mini And Long Di ...
Uluhlu lwe-Ultra Long-Range ngaphandle kwe-4 ...
Ukubambezeleka kweZero kunye neNdleko ...
▪ I-adaptha yevidiyo ye-4K ye-HDMI: Vumela isibuko okanye wandise isikrini sakho seLaptop kwiMax 4K UHD 3840 × 2160 @ 30Hz. Qaphela: i-USB C port kwikhompyuter yakho ifuna ukubakho kwemveliso yevidiyo.
▪ Umfundi weKhadi le-SD / TF: Esona santya siphezulu somfundi wekhadi yi-480Mbps. Amakhadi e-SD kunye ne-TF anokufundwa ngaxeshanye. Ubungakanani obukhulu ukuya kuthi ga kumakhadi e-2TB. Iyahambelana neKhadi leMemori eli-6 eyahlukeneyo: Ikhadi le-SD / SDHC / SDXC / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC.
▪ Ukuhanjiswa kwedatha kwe5Gbps: 3 isantya esiphakamileyo se-USB-A 3.0 amazibuko anakho ukudlulisa isantya se5Gb / s sokudlulisa idatha ngokukhawuleza, ukuvumela ukudibanisa izinto ezininzi ze-USB ezifana ne-U disk, i-SSD ephathekayo, ikhibhodi, imouse, njl.
▪ IAbrocade AI I-7 kwi-1 ye-USB Type C Hub yindawo yokusebenza emininzi yandisa ukunxibelelana kweelaptop.
▪ Kubandakanywa i-2 * i-USB 3.0, i-1 * i-HDMI, i-1 * i-Ethernet (i-RJ45), i-1 * i-slot yekhadi le-TF kunye ne-1 * yekhadi le-SD kunye nenkxaso yokutshaja kwe-PD.
▪ Ukuhanjiswa kwedatha eSuperSpeed: Amathathu ama-USB 3.0 amazibuko axhasa ukuhanjiswa kwedatha ukuya kuthi ga kwi-5Gbps. I-SD kunye ne-micro SD slots (engenakusetyenziswa ngaxeshanye) ixhasa ukuhanjiswa kwedatha ukuya kuthi ga kwi-480Mbps. Izibuko leGigabit Ethernet lixhasa isantya senethiwekhi se-10/100 / 1000Mbps
▪ Ukutshaja ngokukhawuleza kwe-PD: Izibuko lokutshaja le-USB-C lixhasa ukuya kuthi ga kwi-100W yokuhanjiswa kwaMandla ukugcina iMacBook Pro yakho okanye enye ilaptop ehambelana nayo igcwele ngokupheleleyo kwiiyure ezi-2 (usebenzisa isixhobo samandla samandla) xa usebenzisa yonke eminye imisebenzi yehabhu
▪ Ukuhambelana kwesixhobo: Iyahambelana neMacBook Air / Pro 13 intshi, iDell XPS 15, HP Specter x360, HP Elite x2 1012, Google Chromebook Pixel, Lenovo Yoga, Razer Blade Stealth, iHuawei MateBook, kunye nezinye iiLaptops zohlobo C
▪ Ividiyo ye-Ultra HD: Iziphumo zezibuko le-HDMI ukuya kuthi ga kwi-4K @ 30Hz kwisibonisi esixhumeneyo
▪ Brocade AI I-8 kwi-1 ye-USB Type C Hub yindawo yokusebenza emininzi yandisa ukunxibelelana kweelaptop.
▪ Kubandakanywa i-3 * i-USB 3.0, i-1 * i-HDMI, i-1 * i-3.5mm yeaudiyo, i-1 * i-slot yekhadi le-TF kunye ne-1 * yekhadi le-SD kunye nenkxaso yokutshaja kwe-PD.
▪ [Yenza umsebenzi wakho ungasebenzi): Uhlobo C lwehabhu elidityaniswe netshaja engenazingcingo inokwanelisa zonke iimfuno zokudlulisa idatha, ukubeka esweni ukwanda kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Amazibuko amabini e-3.0 e-USB kunye namakhadi e-SD / TF Reader axhasa isantya sokuhambisa isantya ukuya kuthi ga kwizithuba ezi-5.
▪ Iziphumo zeMigangatho yeVidiyo: Mirror okanye wandise isikrini sakho nge4K HDMI izibuko leadaptha ye-USB C kunye nokusasaza i-4K UHD okanye ividiyo epheleleyo ye-HD 1080P kwi-HDTV, iliso okanye iprojektha. Zilungiselele ukonwabela umboniso bhanyabhanya ofana nomthendeleko obonwayo ozisa kuwe.
▪ [Unxibelelwano oluzinzileyo noluthembekileyo]: Enkosi nge-PD3.0, unxibelelwano phakathi kweelaptops kunye ne-USB C Adapter iya izinza ngakumbi. Akusekho xhala malunga nokulahleka kwedatha xa ukhupha intambo yokutshaja. Inkxaso PD ukutshaja kwi-60W ephezulu.